Maxaa la sameeyaa si aad ugu shaqeyso dhakhtarka xoolaha | Sameynta iyo daraasadaha
Maria Jose Roldan | 26/11/2021 12:05 | Tababar
Haddi aad xoolo jeceshay oo aad beerta daawadu jeceshahay. Xirfaddaada ugu habboon waa ta dhakhtarka xoolaha. Dhakhtarka xoolaha waa takhtar ku takhasusay daawaynta xoolaha buka ama dhaawacan. Marka laga reebo taas, xirfadlaha caafimaadka xoolaha ee wanaagsan ayaa awood u leh inuu la taliyo milkiilayaasha xoolaha kala duwan.
Guud ahaan, dhakhtarka xoolaha ayaa ku takhasusay daryeelka xayawaanka, inkastoo uu sidoo kale awood u leeyahay inuu daaweeyo xoolaha ama noocyada qalaad. Maqaalka soo socda waxaan ka hadli doonaa hawlaha ugu muhiimsan ee dhakhtarka xoolaha iyo waxa la sameeyo si aad awood ugu yeelatid xirfadda noocan ah.
1 Waa maxay shaqooyinka dhakhtarka xoolaha
2 Waa maxay profile uu leeyahay dhakhtarka xoolaha
3 Immisa ayuu sameeyaa dhakhtarka xoolaha
4 Maxaa la bartaa si loo noqdo dhakhtar xoolaha
Waa maxay shaqooyinka dhakhtarka xoolaha
Shaqada ugu weyn ee dhakhtarka xoolaha waa inuu hubiyo daryeelka xoolaha. Waa inuu awood u leeyahay inuu sameeyo baaritaanka ugu wanaagsan ee suurtogalka ah, daweyn karo cudurrada kala duwan ee xayawaanka laga yaabo inuu qabo iyo inuu hubiyo in xayawaanka jirran ee uu daweynayo ay si buuxda u bogsan karaan oo ay leeyihiin tayada ugu macquulsan.
Taas ka sakow, waa in dhakhtarka xoolaha uu la taliyo dadka xoolaha iska leh sida ugu habboon ee looga hortagi karo cudurrada ka iman kara ama uu u daweyn karo, xal fiicana loo heli karo. Waa la-taliye dhab ah marka ay timaado daryeelka iyo caafimaadka xoolaha.
Mid kale oo ka mid ah hawlaha waa kuwa la xiriira baaritaanka cudurrada kala duwan ama horumarinta daaweynta qaarkood, taasoo ka caawisa xoolaha buka inay bogsadaan.
Waa maxay profile uu leeyahay dhakhtarka xoolaha
Dhakhtarka xoolaha ee wanaagsan waa inuu muujiyaa naxariis weyn oo loogu talagalay adduunka xayawaanka iyo jacaylka iyaga la. Marka laga reebo tan, oo ah lama huraan, waa inaad noqotaa kormeere karti leh oo faahfaahsan maaddaama tani ay fure u tahay marka ay timaado samaynta ogaanshaha ugu wanaagsan ee suurtogalka ah.
Xirfadaha kale ee la midka ah ee muhiimka ah waa garashada sida loo xalliyo dhibaatooyinka kala duwan ee ka dhalan kara nolol maalmeedkaaga. Dhakhtarku waa inuu noqdaa qof adag marka ay timaado goobta dareenka maadaama mararka qaar uu neefku dhiman karo ama uusan ka adkaan cudur gaar ah.
Dhakhtarka xoolaha ee wanaagsan waa inuu la socdaa horumarka laga yaabo inay ku jiraan adduunka sayniska, maadaama qaybta ugu muhiimsan ee shaqadoodu tahay inay caawiyaan daweynta iyo caawinta xoolaha buka ama dhibban.
Immisa ayuu sameeyaa dhakhtarka xoolaha
Shaqada caafimaadka xoolaha waa in ay ahaataa mid xirfadeed maadaama xagga mushaharka. Waa in la sheegaa inay tahay qayb ka mid ah caafimaadka dadweynaha oo aan mushahar fiican helin. Celceliska mushaharka dhakhtarka xoolaha wuxuu u dhexeeyaa 1.300 euro bishii ilaa 1600 euro bishii. Kordhinta mushaharka waxaa sabab u ah shaqada uu xirfadlaha qaban karo habeenkii ama maalmaha fasaxa. Lacagta waa la kordhin karaa iyadoo ku xiran khibradda shaqo ee xirfadlaha iyo takhasuska uu leeyahay.
Maxaa la bartaa si loo noqdo dhakhtar xoolaha
Marka laga reebo dhinaca farsamada gacanta iyo xirfadaha iyo kartida kor lagu sheegay. Waqtiga lagu baranayo dhakhtarka xoolaha, waa lagama maarmaan in la barto shahaadada caafimaadka xoolaha ee Jaamacadda. Xirfadda lafteedu waxay u baahan tahay ilaa shan sano oo waxbarasho ah iyo naafada weyn marka la gelayo shahaadadan waxaa sabab u ah xaqiiqda ah in calaamadda goyntu ay aad u sarreyso. Haddii aan la helin calaamadda goynta iyo rabitaanka inaad ka shaqeyso adduunka xayawaanka, waxaa jira shahaadooyin tababar xirfadeed oo kala duwan kuwaas oo caddaynaya inay awoodaan inay ka shaqeeyaan sidii Kaaliyaha Caafimaadka Xoolaha ee Rugta.
Marka la soo koobo, xirfadda caafimaadka xoolaha ma aha hawl fudud, maadaama ay u baahan tahay naxariis weyn oo xagga xayawaanka ah iyo sidoo kale in la yeesho xoog shucuureed oo muhiim ah. In kasta oo aanu mushaharku ahayn kan ugu habboon xirfadda noocaan ah, haddana runtu waxa ay tahay in aad loogu farxo in neef gaar ah lagu daweyn karo nooc ka mid ah cudurrada oo laga daweyn karo. Xusuusnow gelitaanka shahaadada caafimaadka xoolaha ma aha hawl fudud, maadaama calaamadda goyntu ay aad u sarreyso oo aad u sarreyso.
Wadada buuxda ee maqaalka: Sameynta iyo daraasadaha » Noticias » Tababar » Maxaa la sameeyaa si aad ugu shaqayso dhaqtarka xoolaha